Ukufika kweTyphoon Talim kuphoqa ukuthuthwa kwabantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingama-600 eJapan | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Sisezinyangeni ezimbalwa lapho izilwandle zase-Atlantic nasePacific ziyindawo yeziphepho eziningana futhi ezinamandla kakhulu kulo nyaka. Izinga lokushisa kwamanzi linikeza amandla amakhulu eziphephweni, ezibizwa ngokuthi yizishingishane e-Asia, futhi bekungeke kumangaze uma, njengoba isikhathi sihamba, ziya ngokwanda ngokwengeziwe.
Kungekudala besikhuluma Irma, isiphepho sesigaba 5 esidale umonakalo omkhulu ngesikhathi sidlula eCaribbean naseFlorida. Hhayi-ke, sengathi bekuyibhayisikobho eshaqisayo, manje yiJapan okufanele ithathe izinyathelo ezidingekayo ukuvikela abantu bayo, kusukela Isiphepho iTalim sisendleleni yokuba yi »Irma» yaseJapan.
Isiphepho uTalim, ishumi nesishiyagalombili lesikhathi sesiphepho sasePacific, ebesiqina kuLwandle lwaseChina ezinsukwini ezi-3 ezedlule, senze ukuwa eJapan izolo ngo-11: 30 isikhathi sendawo (2.30 GMT) e idolobha laseMinami-kyushu, emaphethelweni aseningizimu yesiqhingi esiseningizimu neKyushu. Lapho, ishiye izimvula ezinamandla nemimoya engaphezu kuka-130km / h.
Ngokuphepha, ukhiphe umyalelo wokuthuthwa kwabantu abangama-448 ezindaweni ezahlukahlukene zamadolobha aseKumamoto naseMyzaki, kanye nezakhamizi ezingaba ngu-640.000 kwamanye amadolobha eziqhingi. Kwakudingeka bakwenze: isiphepho, esihamba cishe nge-30km / h ngasenyakatho-mpumalanga sibheke esiqhingini saseShikoku, sasizofika edolobheni laseNichinan, eningizimu-mpumalanga yesiqhingi saseKysuhu ngo-13.50: 4.50 ntambama (XNUMX GMT).
1 Umonakalo ubangelwe kuze kube manje
2 Ithrekhi yeSiphepho iTalim
Umonakalo ubangelwe kuze kube manje
Isithombe - Ichiro Ohara / AP
Okwamanje, kuye kwadingeka ukuba kukhanselwe izindiza zasekhaya ezingaphezu kwama-770, futhi ezinye izingxenye zejubane eliphezulu, kanye nezinsizakalo zezitimela nezikebhe kudingeke ukuthi zimiswe. Ingxenye eseningizimu yezwe ihlala iqaphe imvula enamandla, ukugcwala nokuqubuka komhlabakanye namagagasi aphezulu angabangelwa yisiphepho.
Ithrekhi yeSiphepho iTalim
Isithombe - Screenshot from Cyclocane.com
Isishingishane uTalim kulindeleke ukuthi iye ngasenyakatho-mpumalanga, lapho izothinta khona izingxenye zasentshonalanga yesiqhingi saseHonshu ngaphambi kokuqhubeka iwele uLwandle lwaseJapan, lapho ezofika khona eHokkaido ngoMsombuluko.
Khonamanjalo, kulindeleke ukuthi ihambe imvula eningi cishe kuzo zonke iziqhingi: ama-millimitha angama-350 enyakatho yesiqhingi saseKyushu, iShikoku kanye nesifunda saseKinki; Amamilimitha angama-250 eningizimu yeKysuhu, isifunda saseChugoku naseTokai, namamilimitha angama-200 esifundeni saseKanto-Koshin.
Sizokwazisa nganoma yiziphi izindaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » Ukufika kweTyphoon Talim eJapan kuphoqa ukuthuthwa kwabantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingama-600